Kungakhathaliseki nobhiya uthole amafutha? ekhuluma plain
Njalo fan of the isiphuzo oludakayo ethandwa ngesinye uyabuza, "kungakhathaliseki ukuthi kusukela ubhiya uthole amafutha?" Labo baphuze ambalwa amabhodlela nsuku zonke, sizuze esiswini okuqinile. Ososayensi baye eside kungase kutholakale ukuthi ubhiya ikhalori okuqukethwe iphansi uma kuqhathaniswa ukudla ethandwa kakhulu. Ngakho kungani siye ngokuthi i Ongoti ubhiya esiswini ubhiya?
Kuyini endaweni ibhodlela likabhiya?
Ukuze angasusa noma yikuphi ukungabaza sebecabanga mayelana ukuthi kusukela ubhiya uthole amafutha, udinga ukuthola ukuthi yini ngempela ku amathini noma amabhodlela. Kufanele kuqashelwe ngokushesha ukuthi Ubhiya okuthiwa ophilayo ukwenziwa ku Uhobhane kanye notshwala buhlanjululwe ezitholakala nezitolo ezinkulu kunzima. Phila ucingo umkhiqizo unpasteurized, unfiltered, ngokwezifiso ubhiya nemvubelo. Yiqiniso, ukuthi ukukhiqizwa yezimboni aluhileli zonke lezi zimfanelo ubhiya, ngoba ukuphila eshalofini yalesi siphuzo kuyehla ngokuphindwe kayishumi.
Abakhiqizi ngobukhulu ubhiya abathi ikhalori ongaphakeme, khona amaminerali namavithamini. Kodwa ayivezi khona nezivimbelakuvunda, izithasiselo futhi ethanol. Ngaphezu kwalokho, abaningi baye baqaphela ukuthi ngamunye ibhodlela odakiwe kwandisa isifiso sokudla. Futhi, kungenzeka ukuze uvikele isigamu nemfuneko nsuku zonke kilojoule uma uphuza nelesithupha amalitha. Ngakho-ke, zonke ukungabaza, kungakhathaliseki nobhiya uthole amafutha, kuthiwa linesisekelo. I kilojoule extra kungukuthi wachitha umzimba futhi imali esiswini namathanga. Ingasaphathwa imvelo hormone lesi siphuzo.
Nuts, chips, kebab, crunches kanye izinto, izinto, izinto. Ingabe uthole amanoni ubhiya, lapho esiphuza ibhodlela elilodwa futhi kudliwa pizza omkhulu? Empeleni, ukuphuza ibhodlela elilodwa nje, singakhonzi ngokweqile bazogcwalisa umzimba nge amaprotheni eziyingozi kanye amafutha. Kodwa imikhiqizo isidlo Liyindawo okusezingeni eliphezulu in kilojoule.
Isiphetho wukuthi Kilos extra kungagwenywa cha. Ngisho noma usebenzisa umfuziselo non-utshwala. Uyabuza Uthi, "kungakhathaliseki ukuthi nobhiya non-utshwala uthole amafutha?" Futhi uthole impendulo ka ososayensi nodokotela, "Cha, uma ungenayo isidlo." Eqinisweni, isiphuzo kancane utshwala okunama-kilojoule amaningi (45 kilojoule kuqhathaniswa 31), kodwa appetizer, khona-ke kunjalo.
hormone Female ungayeki ukuphumula
Eminyakeni embalwa edlule yabe seyaziwa ukuthi hormone zesifazane - estrogen - ingatholakala ngokuphuza ukwenziwa ubhiya Uhobhane. Phytoestrogens atholakala Uhobhane uhlevane. A hop - ngesisekelo zonke izinhlobo likabhiya oludakayo. Estrogens ukwenza sibalo isifazane kakhulu futhi ifomu - aluhlaza. On umbuzo ukuthi abesifazane uthole amanoni ubhiya, odokotela anikeze impendulo omuhle. Iqiniso lokuthi umzimba omama abanempilo kwanele hormone ayo. A i-hormone lisuselwa ngaphandle kwethonya nakakhulu ku izinguquko emzimbeni. In amadoda, phytoestrogens nakho kungaholela i ukwakheka kwalo of okunamafutha ezigcine esiswini, izinqulu, emuva.
Kukhona inguqulo kwabona lobo budlelwane obuncane ubhiya aliholeli kwesisindo ngisho uphulukisa umzimba. Kunzima kungqubuzana abacwaningi yososayensi waseMelika ngandlela-thile ukhohlwe ukuthi iyiphi ubhiya - ke, ngaphezu kwakho konke, notshwala. Ngakho-ke, uma ungakwazi bazitike ukusetshenziswa likabhiya, kodwa ufuna ukulondoloza impilo kanye sibalo, nophuzo!
Lisho ukuthini-MRI entanyeni? MRI ka-lymph node, kwakheka imithambo yegazi nezicubu ezithambile entanyeni
Uma uzizwa ugula, yini okufanele uyenze?
20 Isibhedlela, eMoscow, "Babushkinskaya". City Hospital Clinical № 20: ukubuyekezwa, ikheli, amafoni
Kungakhathaliseki noma cha ukuze uzwakale alamu lapho ingane ikhula fontanelle ngaphambili noma kamuva kunokulindelekile?
Amaprotheni C-esisheshayo: izinga nokwanda igazi
Isidakamizwa 'Apilac' (imfundo)
I ubucwebe obubizayo kakhulu emhlabeni: izithombe
Gearbox Manual. Iinsetjenziswa eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa kanye nokugcinwa
Yikuphi ulwandle ugeza Turkey ngasenyakatho, naseningizimu?
PPC Vaz-2110: Idivayisi, ukulungisa
Bream Ejabulisayo ungene indandatho
Growing ukhukhamba in zokugcina unyaka njengoba ibhizinisi
Apple ukuvinjelwa eRussia. Apple eyeka ukulethwa esisemthethweni imikhiqizo yayo eRussia?
Liyini ihaba futhi litotes: izibonelo ezincwadini
Edition lesibili ngesandla: ukuthi kuyini izolo nanamuhla
Vyacheslav Drobinkov (umlingisi): Umlando kanye umsebenzi wokudala
Umuthi 'I-Pyrogenal'. Imiyalo yokusetshenziswa